यदी तपाई शाकाहारी हुनुहुन्छ भने भुलेर पनि नगर्नुहोस यी ८ गल्ती! - Bigul News
असोज १९, २०७७ SLPA
१ अक्टूबरको दिनलाई संसारभर ‘वर्ल्ड भेजीटेरियन डे’ को रुपमा मनाईन्छ। यसको उद्देस्य शाकाहारी खानेकुरालाई महत्व दिनु र यसको फाईदाप्रति जागरुक गर्नु हो। शाकाहारी खाना निकै फाईदादायक हुन्छ। शाकाहारी खानाले वजन कम गर्नुको साथ-साथै सुगर कंट्रोल गर्छ। मुटु सम्बन्धि रोगबाट बचाउँछ र क्यान्सरको ख-तराबाट पनि टाढा गर्छ। यधपी शाकाहारी खानाले हरेक पोषक तत्व लिन सजिलो गर्छ। शाकाहारी खानेकुरालाई लिएर केहि मान्छेहरुमा केहि गलत विचार हुन्छ र यसको चक्करमा केहि गल्ति गर्छन्।
मान्छे आफैलाई भेज खानेकुरा खानु निकै फाईदादायक मान्छन्। जबकि यो जरुरी रहेको हुदैन कि उदाहरणको रुपमा शाकाहारिको रुपमा बदामको दुध निकै लोकप्रिय रहेको छ। यस दूधमा क्यालोरी कम हुन्छ र कैयौँ भिटामिन र मिनरल्स पाईन्छ। तर गाईको दूधबाट धेरै फाइदा हुदैन। यसैगरी भेज वर्गर र नगेट्स र प्रोसेस्ड भेज फूड पनि ननवेजको तुलनामा स्वस्थ मानिदैन। शाकाहारी भएर पनि कैयौँ फूड आइटम्स क्यालोरी धेरै हुने र यसमा प्रोटीन, फाइबर पनि कम पाईने हुन्छ।
शाकाहारी खानामा पर्याप्त भिटामिन बि १२ नहुनु: शरीरमा रगत बनाउनको लागि भीटामिन बि १२ निकै जरूरी हुन्छ। यो भिटामिन धेरै एनिमल प्रोडक्टमा पाईन्छ र शाकाहारी मान्छेमा यस भिटामिनको कमी पाईन्छ। भिटामिन बि १२ को कमीबाट थकान र मेमोरी पावरसँग सम्बन्धित थुप्रै समस्या हानहुन सक्छ। शाकाहारी खानामा केहि यस्तो चिज हुन्छ, जुनमा भिटामिन बि १२ मात्रामा पाईन्छ। आफ्नो खानामा फोर्टिफाइड फूड्स, दही, ओटमील र सोया प्रोडक्ट शामिल गर्यो भने भिटामिन बि १२ को सप्लीमेंट्स पनि लिन सक्नुहुन्छ।
मासुको ठाउँमा यी चीज फाईदादायक: शाकाहारी मान्छेहरु स्यान्डविच, सलाद, पास्ता वा अरु चीजको धेरै प्रयोग गर्छन्। थुप्रै मान्छेको गलत धारणा हुन्छ कि मासुको ठाउँमा यी चीज स्वस्थ हुन्छ। यधपी यी चीज़मा प्रोटीन र मिनरल्स पाईन्छ तर यसले मासुमा पाईने पोषक तत्वको कमी पुरा गर्न सक्दैन। मासुको तुलनामा अरु चीजमा कम प्रोटीन पाईन्छ।
शरीरमा कम क्यालोरी सही: धेरै शाकाहारी खानामा क्यालोरी कम पाईन्छ। मान्छेहरुलाई लाग्छ कि शरीरको लागी कम क्यालोरी सही रहेको छ तर शरीरमा एक संतुलित मात्रामा क्यालोरी हुन निकै जरूरी रहेको छ। मांसाहारी मान्छेको तुलनामा शाकाहारीको शरीरमा निकै कम क्यालोरी हुन्छ। कैलोरीको कमीबाट शरीरमा थकान र कमजोरी महसुस हुन्छ।
शाकाहारी मान्छेले कम पिउछन पानी: पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनु हरेकको लागि जरूरी हुन्छ। खास रुपमा शाकाहारी मान्छेको डाइटमा फाइबरको मात्र धेरै हुन्छ। फाइबर धेरै खाने मान्छेले निश्चित मात्रामा पानी पिउन जरुरि हुन्छ। पानीको कमीले शाकाहारी मान्छेमा ग्यास र कब्जियत जस्ता समस्या हुन सक्छ।
खानामा आईरनको कमी: मासुमा आईरन समेत सबै जरूरी पोषक तत्व पाईन्छ । मासुमा आईरन हुन्छ, जुन शरीरमा राम्रोसँग पच्छ। प्लांट बेस्ड खानामा नन हीम आईरन पाईन्छ। आईरनको कमीले सास लिन समस्या र थकावट जस्ता समस्या आउँछ। आईरनको लागी आफ्नो डाइटमा दाल, बीन्स, नट्स, ओट्स र हरियो सब्जी सामिल गर्नुहोला।
पर्याप्त क्याल्शियम नलिनु: हड्डी र दातको लागि क्याल्शियम निकै जरूरी हुन्छ। क्याल्शियमले शरीरको पूरा फंक्शन सही काम गर्छ। क्याल्शियमको कमीबाट अस्टियोपोरोसिसको समस्या हुन सक्छ। डेरी प्रोडक्टमा क्याल्शिमय भरपूर मात्रामा हुन्छ। जो मान्छे डेरी प्रोडक्ट लिदैन उनको शरीरमा क्यालशियमको कमी हुन्छ। यदि तपाई दूध पिउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो डाइटमा ब्रोकाउली, बदाम, सुन्तला राख्नुहोस्।
मील प्लान बनाउनु: तपाई घरको खाना खाईरहनु भएको छ भने त्यसको लागि लिए मील प्लानिंग जरूरी रहेको छ। रेस्टोरेंट्समा शाकाहारीको लागि निकै सीमित विकल्प हुन्छ। खानाको बारेमा पहिल्यै नै के खाने भनेर निर्णय लिन सक्यौ भने राम्रो हुन्छ ।
प्रकाशित : सोमबार, असोज १९, २०७७१०:५८
२ हप्ता अगाडि DG
छावालाई आमाको याद नआओस् भनेर सँगै सुते उद्धारकर्ता, भयो सर्वत्र चर्चा !
२ महिना अगाडि ST
४ महिना अगाडि SLPA